महिनावारी भनेको पाप हैन । यो त संसारको एउटा यस्तो बरदान हो, जसको कारणले गर्दा मानव अस्तित्व सम्भव भएको छ । एक चोटी सोचौं त, के हाम्रा आमाहरु महिनावारी नभएको भए हाम्रो अस्तित्व सम्भव थियो ?
महिनावारी शब्दले मासिक चक्रको जैविक पक्षलाई बुझाउँछ । ‘नछुने’ले चाहिँ यसको सामाजिक पक्षलाई बुझाउँछ । महिनावारी सृष्टिको आधार हो । ‘नछुने’ महिलाविरुद्धको आततायी अवधारणा भएकोले यसलाई उन्मुलन नगरिकन सही अर्थमा महिलामुक्ति सम्भव छैन ।
समावेशीको चर्को नारा घोषणा पत्रमा राखेर जाने यि दलहरु प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन किन उदार देखिएनन् ?
-लीला लुइटेल- अहिले महिला साक्षरताको प्रतिशत बढेको र छोरीलाई विद्यालय पठाउने प्रचलनमा वृद्धि भएको पाइन्छ । केही समय अघिसम्म पनि छोरालाई महँगा विद्यालयमा पढाउने र छोरीलाई शुल्कै तिर्न नपर्ने विद्यालय खोज्ने अभिभावकको बाहुल्य नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा रहेकै हो । छोरीलाई आत्मनिर्भरताको लागि शिक्षा दिनुभन्दा पनि योग्य वर प्राप्तिका लागि पढाउने, छोरी अभिभावकका लागि बोझका […]
-लक्ष्मी बस्नेत- गत १७ जेठको राजधानी दैनिकमा एङ्कर समाचार छापियो महिला बस्ने पसलका पूजासामग्री अछुतो शीर्षकमा । एङ्कर समाचार पत्रिकाको महत्वपूर्ण ठाउँ मान्ने गरिन्छ । बलराम प्यासीको बाइलाइनमा समाचार छापिएको थियो । पूजासामग्रीको पसलमा महिला बस्यो भने उनीहरू महिनावारी हुने भएकाले त्यहीबेला अछुतो भएको हुन सक्छ भनेर ग्राहकहरू जाँदैनन् भन्ने आशय थियो, त्यस समाचारको । […]
-डा.प्रभा कैनी- आंशिक रूपमा सम्पन्न वैशाख ३१ को स्थानीय निर्वाचन परिणाम प्रायशः आइसकेको छ। झन्डै दुई दशक लामो अन्तरालमा नेपालीले स्थानीय तहमा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अवसर पाएको हुँदा यो एक विशेष पर्वजस्तै सावित भएको थियो। यस आलेखमा महिलाको प्रतिनिधित्वबारे केन्द्रित भएर निर्वाचनपूर्व, निर्वाचन र निर्वाचन पश्चातका केही परिदृश्यको चर्चा गरिएको छ। कुल ७४४ स्थानीय इकाइ […]
-अमृता अनमोल- नयाँ संविधानले स्थानीय तहमा दलले प्रमुख-अध्यक्ष र उपप्रमुखरउपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला अनिवार्य उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वडा समितिमा ४० प्रतिशत महिला सुनिश्चितता गरिएको छ । यसले गर्दा उल्लेख्य संख्यामा महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा हुने भएको छ । यो महिला प्रतिनिधिका लागिमात्र होइन, नेपालकै लागि ठूलो उपलब्धि र परिवर्तन हो । हिजोसम्म छुवाछूतको मार […]